ထိုင်ဝမ်-အမေရိကန် အပြန်အလှန်ခရီးသွားလာရေး အမေရိကန်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသဖြင့် တရုတ်အစိုးရဒေါသထွက် - Yangon Media Group
ဝါရှင်တန်၊ မတ် ၁၇ – အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ထိုင်ဝမ်သို့ အမေရိကန် အထက်တန်းအရာရှိများ စေလွှတ်၍ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်ခရီးသွား လာရေးအတွက် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်အား မတ် ၁၆ ရက်က လက် မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအား တရုတ်အစိုးရက မိမိ ၏ အဝေးရောက်နိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်က အသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံ ခဲ့ခြင်းအတွက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသည်ဟု မတ် ၁၇ ရက် သတင်း များအရ သိရှိရသည်။
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သော ဥပဒေကြမ်း သည် မတ် ၁၇ ရက်မှစ၍ တရားဝင်အတည်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များ တွင် ပြေလည်မှုမရှိဖြစ်နေပြီး တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေသော တရုတ် သွင်းကုန်များလျှော့ချရန် အမေရိကန်နိုင်ငံက တောင်းဆိုထားခဲ့ သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန် အဏုမြူကိစ္စဆွေးနွေးရန် လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကြားဝင်စေ့စပ်နိုင်သည့် တရုတ်အစိုးရ အပေါ် မှီခိုရပ်တည်နေနေရဆဲဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကူကန်က အမေရိကန်- ထိုင်ဝမ် ခရီးသွားလာရေးစာချုပ်ကို တရုတ်အစိုးရက ကန့်ကွက်လိုက်ပြီး အမေရိကန်အနေနှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူ ဝါဒကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထိုင်ဝမ်-အမေရိကန် ခရီးသွားလာရေးစာချုပ်တွင် တရုတ်တစ် နိုင်ငံတည်း မူဝါဒကို စာချုပ်အပိုဒ်တိုင်း၌ ချိုးဖောက်ထားသည်ကို တွေ့နေရ၍ တရုတ်- အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအား ထိခိုက်နိုင်သည် ဟု အမေရိကန်သံရုံးက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
”ဒီစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ လုံးဝမကျေနပ် ပါဘူး။ အမေရိကန်အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ထိုင်ဝမ်နဲ့ မည်သည့်ဆွဲ ဆောင်မှုမျိုးမှ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာ လုပ်လုပ် အေဂျင်စီက အစိုးရကို အသိပေးတိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါ တယ်”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမူ သမ္မတထရန့်၏ အမေ ရိကန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ထိုင်ဝမ်အပေါ်ခြေလှမ်းသစ်ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် အထိ ထိုင်ဝမ်ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါက်ဂပလ်စ်ပါးလ်က အမေရိကန်အနေနှင့် ယင်းစာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မည် မဟုတ် ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ ကင်းလှည့်ရန် အင်ဒိုနီးရှားတိုက်တွန်း
ဈေးတင်ရောင်းချနေသည့် လက်လီနှင့် လက်ပွေ့ဈေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ထ?
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုကိစ္စ ငါးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း အဖြေမထွက်ခဲ့၍ အားရကေ??